Sunday, 12 Nov, 2017 11:44 AM
करिब दुई हप्ताजति हाम्रो घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । त्यसपछि बल्ल सभाको कार्यक्रम गर्छाैं । अहिले बिहानदेखि साँझसम्म घरदैलो कार्यक्रममै छौं ।
बिहान ६ देखि राति १० बजेसम्म १६ घण्टा चुनावी प्रचार अभियानमै खटिरहेको छु ।
फरक–फरक ठाउँमा फरक–फरक कुरा प्रभावकारी हुने रहेछ । जहाँ हामीले आफ्ना केही विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ती ठाउँमा स–साना समूह बनाएर छलफल गर्नु नै प्रभावकारी देखियो । आमसभा त मैले एक–दुईवटा मात्रै गर्छु । सानो समूह बनाएर गरिने छलफलमा मतदाताले प्रश्न सोध्न पाउँछन् । उहाँहरुले के सोचिराख्नु भएको छ भन्ने मैले पनि थाहा पाउँछु । यस्तो तरिकाले मतदाताको मन बुझ्न र सही बाटो तय गर्न मलाई सजिलो हुन्छ ।
तपाईंले मतदातालाई दिएका आश्वासन के–के हुन् ?
यो पटक मैले पाँचवटा विषय भनेको छु । पहिलो : दुःखसाथ आएको संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पर्नु हुँदैन र मेरो प्रमुख प्रयास यसैमा हुनेछ । दोस्रो : अघिल्लो संसदमा मैले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारको लागि जुन लडाईं लडेँ, अब निरन्तरता दिन्छु । अझै बढ परिणाममुखी बनाउँछु । तेस्रो : म सांसदहरुको समूह नै बनाएर युवाहरुलाई नेपालमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न संसदलाई सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जनाका लागि नेतृत्व गर्छु । चौंथो : काठमाडौं उपत्यकाका जतिपनि समस्याहरु छन्, ती कुनै टोल विशेषको समस्या होइन । काठमाडौंमा कुनै पूर्वाधार समयमा बनेन भनेर भनिरहँदा कुनै एक ठाउँको समस्या मात्र होइन, सिंगो ‘भ्याली’कै समस्या हो । त्यसैले मैले योभन्दाअघि सुरु गरेको ‘बस्न योग्य काठमाडौ’ को जुन अभियान छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु । पाँचौ : ४ नम्बर क्षेत्रमा मैले विकास निर्माणका कामहरु सुरु गरेको छु । केही भर्खरै प्रारम्भ भएका छन् । केही बीचमा पुगेको छ । केही अधुरै छ । तुरुन्त टुंग्याउने पर्ने र केही नयाँ कुराहरु थप्नु पर्ने छ । म त्यसको छिनोफानो गर्छु ।
मतदाताले तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै सोध्ने प्रश्न र गर्ने गुनासो के हो ?
ठाउँ–ठाउँमा पूर्वाधारका विषयहरु जुन अहिले निर्माणाधिन छन्, त्यो अलि छिटो सम्पन्न भए हुन्थ्यो भन्ने छ । कतिपय ठाउँहरुमा असाध्यै साना गल्छेडाहरु छन्, हिँड्न मिल्ने बाटाहरु बनाउन पर्यो भन्ने पनि छ । थुप्रै ठाउँमा खानेपानीको समस्याहरु मतदाताले सुनाउँछन् । कतिले सुझावको रुपमा राख्नुहुन्छ । केहीले अझै बढि अग्रसरता लिनु पर्यो भन्नुहुन्छ ।
गगन थापालाई टक्कर दिने राजन भट्टराई भन्छन्– ‘व्यक्तिगत हिरोइजमको संसदमा केही काम छैन’
अहिलेसम्मको अन्तरक्रियाहरुमा पार्टीको घोषणापत्र वा पार्टीको मुल विषयमा खासै चासो देखाएर छलफल गरेको पाएको छैन । आफ्नै वरिपरि घुमेका विषयहरुमा मतदाताले चासो राखेको पाएको छु ।
मतदाताको पहिलो रोजाई पार्टी हुँदो रहेछ या उम्मेदवार ? के पाउनु भयो ?
काठमाडौंमा यो एकदम मिश्रित हुन्छ । पहिला पनि मेरो त्यो अनुभव छ । मत माग्न जाँदाखेरि केही मतदाताहरुले हामी बाजेको पालदेखि काँग्रेस हो भन्ने पनि हुनुहुन्छ । केहीले खुलेर भन्नुहुन्छ– तपाईँलाई नै दिने हो, पहिला पनि दिएको हो, अहिले पनि भोट दिन्छौं भन्नुहुन्छ । योभन्दा अघिल्लो पटक पनि मैले काँग्रेसबाहेक एमाले, माओवादी मतदाताको पनि ठूलो संख्यामा मत प्राप्त गरेको थिएँ । त्यसकारण यो एकदम मिश्रित हुन्छ । कसैले पार्टीको कारणले हाल्नुहुन्छ, कसैले व्यक्तिलाई हेरेर ।
मत माग्न जाँदा अन्य प्रतिस्पर्धी दल र उमेद्वारको आलोचना गर्नुहुन्छ या आफ्नै कुरा राख्नु हुन्छ ?
म आफ्नै कुराहरु नै राख्छु । मेरो एजेण्डा के छ, कसरी जाने भन्ने कुरा नै राख्छु ।
अन्य प्रतिस्पर्धीहरुको चुनावी प्रचारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दुईटा कुरा छ । एउटा, मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने साथी पनि मसँगै संसदमा हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले प्रतिस्पर्धामा जाँदैगर्दा गएको चार बर्षमा म पनि सांसद थिएँ भन्ने कुराको जिम्मेवारी लिने सवाल पूर्णरुपमा अस्विकार गरेको पाउँछु । बिभिन्न सन्दर्भमा मैले राखेका कुराहरु, ४० मिनेटको मेरो एउटा उद्घाटन कार्यक्रमको ‘स्पिच’ थियो । त्यो ‘स्पिच’बाट कुन अंश चाहिएको हो त्यही अंश मात्रै तानेर मेराविरुद्ध भिडियोहरु बनाइएका छन् । तर, केही छैन चुनाव हो त्यसलाई मैले सहज रुपमै लिएको छु ।
सबै उमेद्वारहरुले चुनाव प्रचारप्रसार महंगो भयो भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
सायद म नेपालकै सबैभन्दा भाग्यमानी उम्मेदवार हुँला । अघिल्लोपटक पनि यस्तै थियो, अहिले पनि यस्तै छ । घरदैलोबाट आयौ, सबैजना आ–आफ्नो घरतिर खाना खान जानुभयो । आफ्नै गाडी चढेर आउनु भएको थियो । हामीले लिएर आएको भनेको झण्डा र घोषणापत्र मात्रै हो । एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकन हाम्रो हरेक दिनको कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ ।
हामी पोष्टर टाँग्दैनौं, गाडीमा माइकिङ गर्दैनौं । हामी र्याली गर्दैनौ । घरदैलो गर्छौं । स–साना कार्यक्रम गर्छौं । सबैजसो ठाउँमा कि हामी घर गएर खाना खान्छौं, कि स्थानीय साथीले घरमै बोलाउनु हुन्छ । त्यसैले खर्चको कुनै जोहो गर्नु परेको छैन ।
१२.कुन तप्का र वर्गका मतदाताबाट यहाँलाई बढी आशा लागेको छ ?
त्यस्तो ‘स्पेसिफिक’ भन्ने छैन । सहरी मध्यम वर्गकै जमात भएको ठाउँ हो यो । तर, मेरो पुरानो अनुभवमा जाँदाखेरि त्यस्तो विशेष पाउँदिनँ । ‘रेन्ज’ फराकिलो छ । खासमा युवा साथीहरु मेरो ठूलो आधार हुन् । महिलाहरुको पनि उत्तिकै साथ छ । मेरो आफ्नो पुरानो अनुभवको आधारमा भन्दैछु, कतिपय ठाउँम श्रीमान् एउटा फरक पार्टीको मतदाता हुनुहुन्छ, तर परिवारका सदस्यहरुले मलाई मत हाल्नु भएको छ । त्यो मेरा ‘स्ट्रेन्थ’ हो । ‘इकोनोमिक क्लास’का आधारमा हेर्ने हो भने सबैतिर मेरा मतदाता छन् ।
१३. मुख्य प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्नु भएको छ ?
मुलतः अहिले नेकपा एमाले नै हो । योभन्दा पहिले पनि प्रतिस्पर्धा एमालेसँगै भएको थियो । यो ठाउँमा प्रतिस्पर्धा काँग्रेस र एमालेकै बीचमा हुने हो ।
१४. तपाईंको जितको आधार के हो ?
एउटा त म नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुँ । यो ठाउँमा प्रजातान्त्रिक बिचार राख्नेहरुको बहुलता छ । त्यो नै मुख्य आधार हो । दोस्रो, गएको चार बर्ष, संविधानसभाको सदस्य, यहाँको सांसद र मन्त्री भएर निर्वाह गरेको भूमिका मतदाताले हेर्ने हो । तेस्रो कुरा, मैले गरेको कामको आधारमा अबको पाँच बर्ष संसदमा गएर जे काम गर्न खोज्दै छु । योभन्दा अघिल्लो पटक मैले काम गर्न खोज्दै गर्दा मप्रति एउटा आशा थियो, त्यसलाई प्रमाणित गरेको थिइनँ । अहिले त मैले चार बर्ष संसदमा काम गरेर आएको छु । मन्त्री भएर आएको छु । त्यो नै जित्ने आधार हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।